Ukhuphiswano lwabafundi beSizwe kwiSayensi neMathematika
Kukho ukhuphiswano oluninzi lwelizwe kubafundi bezikolo eziphakamileyo abanomdla kwizibalo, isayensi kunye nobunjineli. Abafundi banokufunda okuninzi ngokuthatha inxaxheba kule mi ganeko, kodwa badibanisa nabantu abaneempembelelo, batyelele iikholeji ezinkulu, kwaye bafumana i-scholarship enkulu! Ukutyelela iiwebhsayithi ezi zikhuphiswano ukufumana ixesha elide kunye neifom zokungena.
Ukuncintisana kwe-Siemens kwiMathematika, iNzululwazi kunye neThekhnoloji
Library Library Photo - PASIEKA / Brand X / Getty Izithombe
I-Siemens Foundation ngokubambisana neBhodi yeKholeji inikeza ithuba elimangalisayo labafundi bezikolo eziphakamileyo kwintcintiswano ehloniphekileyo ebizwa ngokuba yi-Siemens Competition. Abafundi benza iiprojekthi zophando kwindawo ethile yemathematika okanye isayensi, nokuba yedwa okanye kumaqela (ukhetho lwakho). Bese bethula iphrojekthi yabo kwibhodi ehloniphekileyo yabagwebi. Abagqibeleleyo bakhethwa xa abagwebi bahlalutya zonke iziphakamiso.
Ukhuphiswano luhlonishwa kakhulu yiikholeji ezifana neMIT, Georgia Tech, neCarnegie Mellon University. Abafundi abathatha inxaxheba banokuhlangabezana nabantu abanempembelelo kwimathematika nakwizesayensi, kodwa banokuwina amanqaku amakhulu. I-scholarships isebenza ngokukhawuleza njengama-100,000 ayi-$ 100,000 kumajelo kazwelonke. Kaninzi "
Usesho lweTal Science Talent
I-copyright copyright iStockphoto.com. I-copyright copyright iStockphoto.com
I-Intel ngumxhasi wekhono lokukhangela abantu abadala abasesikolweni esiphakeme abagqibile yonke imfuno zekhosi kwiikholeji. Olu khuphiswano lwamazwe lonke i-America ithathwa kakhulu njengempikiswano yezesayensi yangaphambili. Kule mpikiswano, abafundi base-mush bajoyina njengamalungu angabodwa - akukho msebenzi weqela apha!
Ukungena, abafundi mabazithumele ingxelo ebhaliweyo kunye neetafile kunye namashadi anomlinganiselo wephepha wamaphepha angama-20. Kaninzi "
INational Science Bowl
I-National Science Bowl iyimicimbi ebonakalayo ebonakalayo eyenziwa yiSebe leMandla elivulekileyo kubafundi ukususela kwi-9 ukuya kweyesibini. Kukhuphiswano lweqela, kwaye amaqela kufuneka ahlanganise nabafundi abane ukusuka kwisikolo esinye. Olu khuphiswano ngumbuzo uphendule ifomathi, kunye nemibuzo ibe yinto ekhethiweyo okanye impendulo emfutshane.
Abafundi baqala ukuthatha inxaxheba kwimicimbi yengingqi malunga ne-US, kwaye abo baphumeleleyo bathe phiswano kumcimbi wesizwe eWashington, DC Ukongezelela kokuthatha inxaxheba kumncintiswano ngokwalo, abafundi baya kwakha kwaye bahlasele imodeli yemoto yesithuthi. Injongo iya kuba nethuba lokuhlangabeza ososayensi abaziwayo njengoko befundisa kwiingxelo ezikhoyo kwiimathematika kunye nezesayensi. Kaninzi "
Ukhuphiswano lwabaSebenzi bexesha elizayo
Ifoto nguDavid Elfstrom / iStockphoto.com.
Ngaba unomqambi onomnqweno, ubuncinane ubuneminyaka engama-13 ubudala? Ukuba kunjalo, unokuba nomdla ukwazi ukuba iMyuziyam yaseGuggenheim neGoogle ™ ihlangene ukuze inike ithuba elihle. Umngeni walo khuphiswano kukucwangcisa indawo yokuhlala ukuze ibe kwindawo ethile emhlabeni. Uzakusebenzisa amathuluzi e-Google ukwakha indalo yakho. Abafundi bancintisana nemiklomelo yokuhamba kunye nemali. Ukutyelela kwiwebhsayithi kwindawo ethile ukhuphiswano, nokuba ungabandakanyeka njani. Kaninzi "
I-National Chemistry Olympiad
Ukubhala kwezesayensi kuchanekileyo kwaye kuluhlu. I-Tooga / iTeksi / i-Getty Izithombe
Olu khuphiswano lubafundi besikolo esiphakamileyo samakhemikhali. Le nkqubo inamanyathelo amaninzi, oku kuthetha ukuba iqala kumgangatho wendawo kwaye iphelela njengolukhuphiswano lwehlabathi jikelele kunye nomvuzo omkhulu! Iqala nesikolo sakho okanye uluntu lwasekuhlaleni apho amagosa asekuhlaleni e-American Chemical Society adibanisa kwaye aqhuba iimviwo. Abo baququzeleli bakhetha ukhetho lokuncintisana kazwelonke, kwaye abaphumeleleyo besizwe banokukhuphisana nabafundi abavela kwiintlanga ezingama-60. Kaninzi "
I-DuPont Challenge © I-Essay Competition
Ukubhala kubaluleke kakhulu kwizakhono zenzululwazi, ngoko ke lo khuphiswano lenzelwe abafundi bezesayensi ubuncinane ubuneminyaka engama-13 ubudala abanokwenza isicatshulwa esikhulu. Olu khuphiswano luyodwa kuba abafundi bagwetywa ngokubaluleka kweengcamango zabo, kodwa nakwizinto ezifana nesitayela sokubhala, intlangano kunye nezwi. Ukhuphiswano luvulelekile kubafundi base-US, eCanada, ePuerto Rico naseGuam. Iimvavanyo zifuneka ngoJanuwari. Kaninzi "
Iingcebiso ze-DIY zokubuyela esikolweni
EBlue Blue Book
Ukubaluleka koMxholo wembali ekuHlalweni nasekuHlanyelweni
Ukuhlaziywa ngokubanzi kwe-MacGregor 26M i-Sailboat
I-Holy Rudraksha: Imbewu Ephezulu
Iingelosi ze-Bibe: Ingelosi enkulu iRaguel, i-Angel of Justice, i-Deals kunye neSono
6 Iimpendulo Zomsindo kwi-Casting kaMikeet Keaton njengoBatman
Romance Through Ages
I-Reader Imeyili: Ziziphi iiplanga ezigqoka?
Umdlalo wokuLwa kweMidlalo
Phonsa i-ins, iinjongo ze-Goal, ne-Corner Kicks
Indlela i-Gypsy Moth eya ngayo eMelika
Uluhlu lwezinzala zika-Eleanor zeAkitaine ngoJohn, uKumkani waseNgilandi